Adobe Color: Wax kasta oo aadan ka aqoon barashada midabka | Abuurista khadka tooska ah
Christina Zapata | | Waraaqaha midabaynta
«Midabada» arjun.nikon waxaa shati ka haysta CC BY-SA 2.0
Waxaa lagu qiyaasaa in isha aadanaha ay kala saari karto in ka badan ... 10 milyan oo midab! Ogaanshaha astaamaheeda waxaan ku yeelan karnaa fikrado badan oo dheeraad ah abuuritaankeena, hadday tahay rinjiyeynta, qurxinta, naqshadeynta iyo wax kasta oo midabbada lagu dhejin karo.
Midabka waxaa si baaxad leh u darsay faylasuufyo, saynisyahano, cilmi-nafsi, farshaxanno ... taariikhda oo dhan. Waxaan ka hadli karnaa sifooyinkiisa, wareegga chromatic, noocyada midabka iyadoo loo eegayo shuruudo badan, miisaanka chromatic, saameynteeda nafsiyeed ... iyo dheer iwm
Waxaan horumarin doonaa mid kasta oo ka mid ah astaamahan hoos ku xusan.
1 Wareegga chromatic
2 Sifooyinka midabka
3 Miisaanka Chromatic
4 Midabaynta midabka iyo Adobe Color
5 Saamaynta midabku ku leeyahay aadanaha
Wareegga chromatic waa matalaadda garaafka ee midabada ay ku kala jaban tahay muuqaalka iftiinka muuqda. Waxay matali kartaa midabada aasaasiga ah ama sidoo kale midabada labaad iyo kuwa sare. Midkoodna caddaan (wadarta midabada aasaasiga ah) ama madow (iftiin la'aanta) uma muuqato.
Midabada koowaad: laguma gaari karo isku darka midabada kale.
Midabada labaad: waxay ku samaysan yihiin iyagoo isku daraya laba midab oo aasaasi ah.
Midabada jaamacadeed: waxay ku samaysan yihiin iyagoo isku daraya midab aasaasi ah iyo mid sare.
Waxaa jira wareegyo midabbo kala duwan oo ku xiran hadday midabbada aasaasiga ah ay ku qeexan yihiin midabbo dabiici ah (marka laga hadlayo ranjiga), shaashad (marka laga hadlayo naqshadeynta ama sawir qaadista) ama ay ku jiraan maaddooyinka madbacadda.
Giraangiraha midabka ee rinjiga (RYB): isticmaal midabada dhaqanka, kuwa ugu horeeya waa casaan, jaalle iyo buluug.
Wareeg midab leh oo loogu talagalay naqshadeynta ama sawir qaadista (RGB): isticmaal midabada fudud, waa Casaan, Cagaar iyo Buluug.
Wareeg midab leh oo daabacayaasha ah (CMYK): isticmaal midabada midabka, waa Cyan, Magenta iyo Jaale. Xaaladdan oo kale, khad madow ayaa lagu daraa si loo abuuro xoog badan.
Midabku wuxuu leeyahay saddex waxyaalood oo aasaasi ah: midab, dhereg, iyo nuur.
Hue: wuxuu kala saaraa midab midab kale, isaga oo tixraacaya kala duwanaanshaha yar ee midabka uu midabku ku sameeyo wareegga chromatic-ka ee aaggiisa dhow. Waxaa jira midabbo badan oo kuxiran midabkooda. Sidaa darteed, gudaha codka cas, waxaan ku kala saari karnaa hooska casaanka ee kala duwan: casaan, amarant, carmine, vermilion, garnet, iwm.
Doogsi: waa xaddiga cawl ee midabku leeyahay, kaas oo go'aamiya inta uu le'eg yahay. Sidaa awgeed, sare u qaadidda saturation-ka, xoog badan iyo qaddar yar oo cawl ah oo ka kooban halabuurkeeda.
Luminosity: Waa xaddiga iftiinka ee midabku ka tarjumayo, taasi waa, sida iftiinka ama mugdiga uu u yahay. Iftiinka sareeyaa, iftiinka badan ayaa ka tarjumaya.
Markii aan kala duwanaanno guryaha kor ku xusan, waxaan abuureynaa qiyaasta koromatikada. Qiyaastani sidoo kale waxay noqon kartaa aromato.
Chromatic: Waxaan isku darnaa midabada saafiga ah ee caddaanka ama madow, sidaas awgeedna way ku kala duwan tahay iftiinka, dhererka iyo midabka.
Xaraashka: Caws-culeys cadaan ilaa madow.
Midabaynta midabka iyo Adobe Color
Is-waafajinta midabada ayaa la abuuraa markay leeyihiin qaybo ka mid ah iskumid. Waxaan ku iftiimin karnaa barnaamijka Adobe Color ee arrintan la xiriira, maxaa yeelay waxay noo oggolaan doontaa inaan abuurno tiro aad u fara badan oo ah midabada iswaafajinaya, ka qeybgalka cilaaqaadka kala duwan ee aan hoos ku arki doonno.
Midabada analogga ah: midabada deriska ah ee midabka la xushay oo ku taal shaag midab leh.
Midabada Monochromatic: waa hooska midabka.
Midabada saddexda ah: waxay noqon doontaa seddex midab oo isleeg ah oo ku saabsan wareega chromatic, oo si aad ah iskaga hor imanaya midba midka kale. Tusaale ahaan midabada koowaad.
Midabada dhameystiran: kuwani waa midabbo ku kala yaal meertada koromatiga.
Iyo etetera dheer.
Saamaynta midabku ku leeyahay aadanaha
Saamaynta nafsaaniga ah ee adeegsiga midabbada kala duwan ay ku yeelato aadamaha ayaa iyaduna si weyn loo darsay. Sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa xaqiiqda ah in taariikhda midabbada oo dhami ay la xiriiraan dhacdooyin kala duwan, iyagoo u gudbinaya macno dhaqameed iyaga ka mid ah. Dhaqanka reer galbeedka:
White: nabad, daahirnimo. Sidoo kale qabow, ma dhalaysnimo.
negro: qarsoodi, xarrago, xeel dheer. Sidoo kale dhimasho, xun
Rojo: qiiro, galmo, firfircoonaan.
Verde: dabeecadda, caafimaadka, dheelitirka.
Azul: xasillooni, ballanqaad.
Rosa: dhalinyaro, danqasho.
Maxaad sugeysaa inaad bilowdo abuuritaanka midabyo iswaafajsan oo shuqulladaada ah oo dhaliya saamaynta aad ku rabto dadka kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta » Wax Kasta Oo Aanad Ka Ogayn Barashada Midabka
Astaamaha kooxaha NBA ee leh astaamaha Disney ee aad mid walba jeclaan doontid
Bob Ross: Professor-ka Farshaxanka ah ee Loogu Talo Galay Saliid Walba Waa inuu Ogaadaa